Businovo मा Sergiya Radonezhskogo को चर्च, wrens: इतिहास
Radonezh को सेन्ट Sergius विशेष गरी अर्थोडक्स रूस मा, तर पनि विदेशी देशहरुमा मात्र होइन venerated। यो सेन्ट को सम्मान मा मन्दिर निर्माण को तथ्य संकेत छ। विदेश, तिनीहरूले बीस-दुई erected। र रूस मा उनि बारेमा सात सय रेकर्ड (र यो वैध छ)। विशेष गरी चर्च, chapels, स्थानहरू निर्माण चर्च को धेरै जहाँ, पौराणिक कथा अनुसार, त्यो पुरानो मानिस भ्रमण गर्नुभएको थियो। यस्तो Businovo र wrens मा Radonezh को सेन्ट Sergius को चर्च छ।
Wren मा चर्च को निर्माण को इतिहास
को Wren मा Sergiya Radonezhskogo को चर्च 1591 देखि साहित्य मा उल्लेख गरिएको छ। यसको निर्माण ठीकै आधुनिक मास्को इलाका मा अवस्थित छ जो पुरानो, को एक सकिन्छ।
1938 मा, मन्दिर उपासना मा Bolsheviks को क्रम प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। निर्माण नराम्ररी वास्तै थियो। मात्र 1991 मा, मास्को को कुलपिता र सबै रूस Alexy द्वितीय Radonezh को सेन्ट Sergius को सिंहासन consecrated र सेवा फेरि सुरु गरियो।
आज, मन्दिरको पर्खाल धार्मिक मान्छे को सबै भन्दा revered shrines तीन छन्। Radonezh को सेन्ट Sergius यस प्रतिमा अवशेषहरूको संग Wonderworker। को सत्रौँ शताब्दीमा - छवि सृष्टिको समय। यो समय, अर्को relic मन्दिर छ - कुलपिता Nikon को क्रस। परमेश्वरको आमा को THEODORE छवि अठारौँ शताब्दीमा स्थापित भएको थियो। प्रतिमा विश्वासीहरूलाई को एक ठूलो संख्या आकर्षित र चर्च यसको वैध ठाउँ लिन्छ।
Businovo मन्दिरमा बारेमा ऐतिहासिक जानकारी
Businovo मा Sergiya Radonezhskogo को चर्च एक धनी इतिहास छ। लोक दन्त्यकथा र विश्वसनीय ऐतिहासिक डेटा मन्दिरको निर्माण को ठाँउ नै Sergiy Radonezhsky छ भनेर सहमत हुनुहुन्छ। मास्को मा आफ्नो विहारको देखि यात्राको समयमा उहाँले Businovo मा आराम गर्न रोकियो र गाउँमा एक चर्च निर्माण उहाँको आशिष् दिनुभयो। मन्दिरको उल्लेख 1584 बुझाउँछ। यो Georgiya Pobedonostsa को सम्मान मा बनाइएको थियो। 1623 मा - कारण यसको dilapidation गर्न - को काठ चर्च गाउँलेहरू dismantled थियो।
1643 मा, आफ्नै पहल मा, एउटै ठाउँमा Sergiya Radonezhskogo को सम्मान मा एक नयाँ काठ चर्च बनाइएको थियो। लामो समय को लागि आफ्नो अस्तित्व यो उपस्थिति परिवर्तन, धेरै पटक पुनर्निर्माण गरिएको छ। 1859 मा, चर्च Sergiya Radonezhskogo Businovo मा पत्थर को बनाइएको थियो।
महान् अक्टोबर क्रान्ति र को विजय संग Bolsheviks शक्ति आए पनि अर्थोडक्स चर्च यसको इतिहास मा सबै भन्दा कठिन समयमा थाले। चर्च र अनुयायीहरूले सेवकहरू क्रूर दमन गर्न subjected थिए, चर्च बन्द र नष्ट भएको थियो। यो भाग्य र Businovo मन्दिरमा Sergiya Radonezhskogo बच छैन।
1937 देखि 1990 को लागि, भवन राज्य चर्च belonged। यो समयमा, यस भवन को सबैभन्दा औद्योगिक बिरूवा लागि छाँटकाँट बाँकी विनाश थिए। केही वर्ष धार्मिक भवन त्यागेर थियो। बारम्बार मन्दिरको पुनर्स्थापना विश्वासी अनुरोध प्राप्त भयो। तर हरेक समय अनुयायीहरूले अस्वीकार गरेका थिए।
को गिरजाघर Sergiya Radonezhskogo मा Liturgy
मात्र 1990 मा, पुनर्स्थापना काम अर्थोडक्स समुदाय नेतृत्व जो, थाले। म जीवन र इलाकाका जीवन आउन थाले। 1991 मा, जुलाई 18, चर्च liturgy मा प्रदर्शन भएको थियो। मण्डली सेवा को बीस अधिक वर्ष को लागि यो दिन देखि नियमित बाहिर छ।
अनुयायीहरूले बिहान र साँझ कार्यालय भ्रमण गर्ने अवसर छ। विशेष दिन प्रतिबद्ध छन्, र vigils।
सेवाहरूको तालिका, साथै तिनीहरूलाई लगे जो पूजाहारीहरू को नाम, राम्रो अनुयायीहरूले लागि परिचित छन्। मण्डली विश्वासको मान्छे संग प्रत्यक्ष सञ्चार आफ्नो गतिविधिहरु बारे बताउन, साथै मिडिया, इन्टरनेट मार्फत खोज्छ।
Borovsky विहारको। बुबा Blasius - Borovsky विहारको। गुम्बामा Borowski को प्राचीन
जन बप्तिस्मा दिने आश्रममा (मास्को)
सेतो वा रातो - बढी उपयोगी सिमी के हो? क्यालोरी र सिमी को गुण
हामी छोराछोरीलाई ओरिगेमी हंस के
घर मा व्हिस्की। घर मा व्हिस्की बनाउने
कसरी YouTube मा च्यानल नाम, र के अवसर यो सेवा गर्छ
चाखलाग्दो कुरा, र जहाँ मलोर्का?
पोर्चुगल गरेको राजधानी यसको अतिथि एक रोचक छुट्टी प्रदान गर्दछ